रङ्गिन तर रङ्ग हिन् साँझ!!::KhojOnline.com
रङ्गिन तर रङ्ग हिन् साँझ!!
दिन भरिको थकान मेटाउने
शितल चौतारी जस्तो
अझ भनौं, गोघुलिमा सजिएकी
नब दुलहिको साडी जस्तो…
यति रङ्गिन साँझ मन नपर्ने
बिरलै होलान् !
फेरि पनि मलाई भने
निरस निरस लाग्छन् यि साँझहरू!
यिनै साँझका बिसयमा
गरिने टीका टिप्पणीहरू
बिना अर्थका बहस लाग्छन् !
त्यो साँझ जस्ले कसैको
दुखमा समाहित हुन चाहेन
बस् हेरि मत्रै रह्यो!! तथापि
मीठो गीत र सँगित हुन चाहेन
जसै दिन ढल्यो पश्चिम आकासमा
ऊ ब्यूँझियो र जुरूक्क उठ्यो
नितान्त निस्ठूरी साँझ बनेर !
यसैले त यी साँझहरू
मलाई अत्यान्त निरस लाग्छन् !
माऊ चराको व्यग्र पर्खाईमा
बसेका नबजात बचेराहरू
भोकले रन्थनी रहेको बेला
बिना आहारा फर्किनुको पीडा बोध
न कैले भयो उस्लाई!
भयो त शहरका गजल नाईट र
मेहफिलमा घन्किने भाकाहरू
जस सँग उस्ले हँमा हँ मिलाएकै हो!
आँशुमा डुबेका दुखी मनहरू लाई
आँशुका थप प्याला पिलाएकै हो !!
त्यो साँझ जो सँग अलिकती पनि
नारी बेदना महसुस हुन्थ्यो भने,
कयौँ नारी पात्र जो रातलाई
जीवन धान्ने आधार मानेर
अपरिचित पर पुरूस सँग
आफ्नो शरीर र सिङ्गो जिवनको
सौदाबाजी गर्न बाध्य हुन्छन्,
तिनिहरू प्रती नतमस्तक बन्नु साँटो
तिन्को दुखेको घाउमा
मलम पट्टी बन्न नसक्नु
उस्को लाचारीपना बाहेक
अरू केही हुनै सक्दैन
हो, त्यसैले त मलाई
मन्पर्दैन् तिम्रा यी
अनि रङ्गिन भएर पनि
रङ्ग हिन बनेका साँझहरू!!
सोम, साउन १६, २०७४ मा प्रकाशित